Inkathi Yokuphakama e-Central Downtown Newport Condo - I-Airbnb
Inkathi Yokuphakama e-Central Downtown Newport Condo
Hlala kusofa Wamafu nge-Restoration Hardware ngaphansi kwefasitela lengilazi enemibala elicwebezelayo. Yidla ekamelweni elinosilingi ophakeme njengoba ukukhanya kudansa ezibukweni. Iphalethi elimpunga elimhlophe nelipholile lisusa uju olujulile, elibuyiselwe phansi elidala elikhazimulayo.
Jabulela ikhofi uhlezi ezihlalweni ezingaphandle ze-Ficks Reed endaweni yakho yangasese yangaphandle, noma thatha unyawo usuka emnyango wakho uye cishe kuyo yonke into enikezwa yiNewport. Lena indawo ekahle yokusebenza ukude, ene-inthanethi enesivinini esikhulu, kanye netafula elide Lokubuyisela Izingxenyekazi zekhompuyutha ongazisebenzisa njengesiteshi somsebenzi. Siyaziqhenya ngokuqinisekisa ukuthi i-condo ihlanzekile.
Jabulela ikhofi uhlezi ezihlalweni ezingaphandle ze-Ficks Reed endaweni yakho yangasese yangaphandle, noma thatha unyaw…
4.87 (izibuyekezo ezingu-225)
Ikhaya lisenkabeni yeNewport yomlando, izinyathelo nje ukusuka eNewport Harbour, ukuyothenga okusezingeni lomhlaba, indawo yokudlela engasemanzini, izingosi zomlando, amakhefi, iminyuziyamu, kanye netekisi lamanzi eliya ku-Jazz and Folk Festivals. Hamba uye e-Goat Island kanye ne-Broadway ethandwayo.
Ibanga ukusuka e- T. F. Green Airport
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R7915.